Sawirada Google waxay kudareysaa aalad cusub oo lagu sawiro sawiradeena | Androidsis
Sawir: Android Police
Tan iyo markii la bilaabay, Sawirada Google waxay sii wadayaan inay kordhiyaan tirada dadka isticmaala, mahadnaq uma aha oo keliya suurtagalnimada inaan ku keydinayno sawirradeena tayo sare (ma ahan sawirka asalka ah), laakiin sidoo kale fursado badan oo aad si joogto ah ugu darto iyo in yar oo yar ayay noo ogolaanayaan inaan joojino adeegsiga barnaamijyada kale.
Muuqaalka ugu dambeeya ee hadda si rasmi ah loogu dhawaaqay, waa suurtagalnimada raadso / ku qoro sawirada si toos ah uga socota arjiga, adigoon u baahnayn codsiyo dhinac saddexaad ah. Shaqadani waxay si tartiib tartiib ah u gaareysaa boosteejooyinka ay maamusho Android.
Muuqaalkan cusub kuma yimaado foomka cusboonaysiinta, tan iyo markii sida muuqata horeyba looga heli jiray noocayaga Sawirada Google, laakiin lama dhaqaajinayo, markaa waa arrin saacado ama maalmo ah in laga heli karo qalabkeena.
Hawshan cusub waxaa laga heli karaa iskuxirka tafatirka oo ah badhan gooni ah, markaa uma baahnid inaan u adeegsanno menu kasta si aan dhakhso ugu helno. Interface-ka ayaa na siisa laba nooc oo faalig ah iyo tiro badan oo midabbo ah oo la heli karo.
Qalab noocan ah ma laha sir badan mana soo bandhigi karo hawlo ka badan intii ay horeba noo siisay. Xaqiiqdii, waa ficil ahaan shaqo isku mid ah oo aan ku hayno qashinka Android Pie.
Sidii aan kor ku soo sheegay, ma jirto qaab suurtagal ah oo lagu soo dejiyo nooc ka mid ah Sawirada Google oo horeyba ugu jiray shaqadan shaqeysay, sidaas darteed looma baahna in la aado bakhaarka APK Mirror si aad u hesho nooca ugu dambeeya. Si loo isticmaalo, waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan sugno oo aan dulqaad yeelano.
Laba toddobaad ka hor, wiilasha ay Sawirrada Google, waxay u bixiyeen kaaliyaha tab, halkaas oo aan ka heli karno xusuus iyo talooyin sawir, Magaca Para ti, magac in badan la jaanqaadaya waxa runti uu na siinayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sawirada Google waxay kudareysaa aalad cusub oo lagu sawiro sawiradeena